Maxaa kasoo baxay kulankii xasaasiga ahaa ee dhex maray Cabdi Qeybdiid iyo Madaxweyne Farmaajo? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa kasoo baxay kulankii xasaasiga ahaa ee dhex maray Cabdi Qeybdiid iyo...
Maxaa kasoo baxay kulankii xasaasiga ahaa ee dhex maray Cabdi Qeybdiid iyo Madaxweyne Farmaajo?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalay kulan la qaatay Senator Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid) oo shalay ay gurigiisa weerarreen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Somalia ee Imaaraadku tababarreen.
Labada dhinac ayaa isla garta in arrinta loo daayo baaritaanka socda, isla markaana meesha laga saaro in qaab siyaasadeed looga faa’iideysto arrintan dhacday, taasoo la isku afgartay.
Senator Cabdi Xasan Cawaale ayaa ka dalbaday madaxweynaha in xoogga la saaro sidii loo heli lahaa cidda amarka bixisay ee ka dambeysay weerarka lagu aaday Gurigiisa oo dhibaatada gaartay ay kala weyn tahay in la ogaado sababta iyo cidda amarka bixisay.